အမြင်မှာနိမိတ်လေလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမြင်မှာနိမိတ်လေလား
Posted by padonmar on Jan 7, 2012 in Creative Writing, Photography, Style & Beauty | 22 comments
ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟိုရှေးမြန်မာဘုရင်တွေ လက်ထက်က အယူတော်မင်္ဂလာဆိုတာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
လူထုတွေကြားထဲမှာ မြင်ရကြားရတာတွေပေါ် မူတည်ပြီး နောက်အနာဂတ်ကို ဟောကိန်းထုတ်ကြတာပါ။
ကျွန်မတို့လို လူပြိန်းတွေကတော့ နောက်နှစ်တွေကြာတော့မှ ပေါက်ဖေါ်လုပ်ရတာပေါ့။
ဘယ်တုံးက ဘာမြင် ဘာကြားခဲ့တာလေ နောက်တော့ ဘာဖြစ်သွားတာပေါ့ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ကြားလျှင် တဘောင် တဲ့။
မြင်ရတာတွေက အနာဂတ်အတွက် နိမိတ်၊ လက်ဆောင်ရတာကို အတိတ်ကောက်၊ ကြားရတာကို တော့ တဘောင်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။
အဆိုတော် “ဇော်မင်းလေး”ရဲ့ နာမည်ကျော် “အာလူးလာမပေးနဲ့” ဆိုတဲ့သီချင်းလေ။
အဲဒီသီချင်းထဲမှာပါတဲ့ “ဘူတာရုံမှာ သင်္ဘောကြီးတွေ ဆိုက်လို့တဲ့၊ မယုံမရှိနဲ့၊ အမှန်ပါဘဲကွယ့်” ဆိုတဲ့ စာသားအတိုင်း
သိပ်မကြာခင်နှစ်မှာ ပြည်မြို့ဘူတာရုံနားအထိ သင်္ဘောတွေ၊ လှေတွေသွားလို့ရအောင် ရေကြီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အမြင်မှာ နိမိတ်အတွက် နမူနာတစ်ခုကတော့
ကလေးတွေရဲ့ကျောင်းလွယ်အိတ်ဟာ ဘေးမှာလွယ် ရတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအိတ်ကနေ ကျောပိုးအိတ်တွေဖြစ်သွားတာပါဘဲ။
အဲဒီလို ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ စာအုပ် တွေတနင့်တပိုးကြီး ထည့်ပြီးလွယ်နေရတဲ့ ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး လူကြီးသူမတွေက ဒီကလေးတွေ အရွယ်ရောက်ရင်
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဟာလည်း နိမိတ်ကောက်စရာ အာရုံတစ်ခုပါဘဲ။
ဘုရား စောင်းတန်းတွေမှာ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်နဲ့ သတိပေးထားရလောက်အောင် ဝတ်ခဲ့ကြတဲ့ နောက်ကွဲ၊ ရှေ့ကွဲ ဘေးကွဲစကပ်တွေ၊ ထမီစကပ်တွေကိုကြည့်ပြီး
ဒါကြောင့်အကွဲအပြဲဇာတ်လမ်းတွေ နေရာတကာမှာ တွေ့နေကြရတာဘဲလို့လည်း ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
အခုတလော မြင်ရတာလေးတွေကိုလည်း ကျွန်မက နိမိတ်ကောက်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဒီဘက်နှစ် တွေမှာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေအတွက် မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စုံလေးတွေ ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာပါတယ်။
အစပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားကဝင်လာတဲ့ အပျော့သားလေးတွေကို ရင်ဖုံးအင်္ကျီပုံစံချုပ်ဝတ်လာကြပါတယ်။
အောက်ပိုင်းအတွက်လည်း ဘေးမကွဲတော့တဲ့ လုံချည်၊ စကပ်လုံချည်တွေနဲ့ တွဲဝတ်လာကြပါတယ်။ ကြည့်လို့လည်းလှကြပါတယ်။
မင်းသမီးတွေ၊ မော်ဒယ်မလေးတွေရဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီဝမ်းဆက်တွေဟာ ဖက်ရှင်စာအုပ်တွေမှာ နေရာပေးလာကြပါတယ်။
အဲဒီကနေတဆင့် မြန်မာဖြစ်ချည်ထည်လေးတွေလည်း ပြန်ပြီးခေတ်စားလာပါတယ်။
အန်တီစုကလည်း Media ကတဆင့် လူထုရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ကတည်းက မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေဘဲ အမြဲဝတ်ထားတာကိုတွေ့ရတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပိုးထည်တွေဟာ အလှူမင်္ဂလာဆောင် ပွဲလမ်း တွေမှာပါ ဝတ်လာကြပါပြီ။
အဲဒီပိုးထည်ကြော်ငြာတွေထဲမှာမှ ဝတ်မှုံရွှေရည် နဲ့ကြော်ငြာထားတဲ့ Bill Board က ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ခေါ်တဲ့ အစိမ်းနဲ့အနီကိုတွဲပြီးချုပ်ထားတာပါ။
၀တ်မှုန်ရွှေရည်လေး ၀တ်ထားတော့ လှနေတဲ့ အစိမ်းနဲ့ အနီ
လှတဲ့သူဝတ်တော့ လှနေတာပါဘဲ။ အဲဒီလိုဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်တွေ စပ်ပြီးဝတ်တာကို Opposite (သို့) Contrast လို့လည်းသုံးကြပါတယ်။
ချည်ထည်တွေရက်ရာမှာလည်း အဲဒီလိုဘဲ ဆန့်ကျင်ဘက် အရောင်တွေနဲ့ တွဲစပ်လိုက်ပြီး ဈေးကွက်ပေါ် ရောက်လာပါတယ်။
ချည်ထည်ဈေးကလည်း သက်သာ၊ ရာသီဥတုနဲ့ညီညွတ်တော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများ ချည်ထည် Opposite နဲ့လှနေကြပါပြီ။
ဒါလေးကတော့ သူငယ်ချင်းမမရဲ့ ချည်ထည် opposite လေးပါ၊မမက သူ့အချိုးအစားကို ဝေေ၀့တုံးကလို ခန့်မှန်းနေကြမှာစိုးလို့ လူကိုယ်တိုင် model လုပ်မပြပါဘူး၊၀တ်စုံဘဲပေးရိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အရင်က ကျွပ်ကျွပ်အိတ်တွေ၊ လက်ဆွဲအိတ်တွေဆိုရင် ကာလာတစ်ရောင်တည်းပေါ်မှာ တံဆိပ်ရိုက်ကြရာကနေ နှစ်ရောင်စပ်တွေ ထုတ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
လက်ဆွဲ ပလပ်စတစ်အိတ် နှစ်ရောင်စပ်ကလေးပါ
ကြွပ်ကြွပ်အိတ် နှစ်ရောင်စပ်လေးတွေ ခေတ်စားနေပါတယ်၊
ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အရောင်စပ် ထုတ်ကြသလဲတော့ ပလပ်စတစ်လောကကို မသိတဲ့အတွက် မပြောပြတတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မမျက်စိထဲမှာတော့ ဒီလိုဆန့်ကျင်ဘက် တွေပေါင်းစည်းပြီး လှနေတာ၊ အသုံးကျနေတာ ၊ခေတ်စားလာတာ
ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် နိမိတ်ပုံလေလားလို့ ကိုယ်လိုရာလေးဆွဲပြီး နိမိတ် ကောက်လိုက်ချင်ပါတယ်။
အယူအဆမတူ ရန်သူလို့ မသတ်မှတ်ဘဲ ပျှမ်းမျှတူညီနေတဲ့ အမှန်တရားလေးတွေ ရှာဖွေဆက်စပ်ပြီး လက်တွဲလိုက်ရင်
အလှတရားတစ်ခု တွေ့ရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောပါရစေရှင်။
ငယ်ငယ်က ၀ါးတွေပွင့် တော့ လူကြီးတွေ ပြောကြတာ မင်းပြောင်းမင်းလွဲ ဖြစ်မယ်တဲ့ မကြာပါဘူး ၈၈ အရေးခင်ဖြစ်ရော သန်လျှင်ဘက်မှာ ၀ါးပွင့်တာနော် တခြာဘက်တော့မသိဘူး.. နောက်ထပ်သိပ်မကြာပါဘူး နဲနဲပွင့်သေးတယ် အရင်လို နေရာအနှံ့ ပွင့်တာမဟုတ်တော့ဘူး…. အဲ ဘဘကြီးဖြစ်သွားရော အခု ဘဘလေးဖြစ်သွားပြီ ၀ါးပွင့်တာမကြားရဘူးဆိုတော့ကာ…… ဆိုတော့ကာ…………….
အရင်က အတိတ်၊ နမိတ် က တကယ်ဖြစ်ခဲ့ ရှိခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဒီနေ့အထိတောင်ပါလာသေးတယ် မဟုတ်လား နာမည်ကြီး ဆရာတော်တပါးလောက် လက်ခလေးထောင်ပြီးတရားဟောရင် နောက်ကနေ ၄ ထိပ်စီးသေချာတယ် ၅နောက်ပိတ် ဆိုပြီး အတိတ်ကောက်ကြရော…:(
အ၀တ်အစားနဲ့ ပတ်သက်ရင် တော့ ကျွန်တော်က အဲဒီ (Opposite) ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် ..ဖိနပ် အဖြူလေး တစ်ရံ ကြိုက်လို့ ၀ယ်စီးပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေက ၀ိုင်းပြောကြတယ် ပြေတီဦးက ဘောင်းဘီအဖြူနဲ့ ဖိနပ်အဖြူစီးတာ မင်းက ဂျင်းဘောင်းဘီ အပြာကြီးနဲ့တဲ့ ကျွန်တော်လဲ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ဟိုက ပြေတီဦး ငါက ပြေတညင် လို့…:P
အန်တီ နမိတ်ကောက်တဲ့ အလှတရားလေးတွေ ပြည့်စုံနိင်ပါစေ လို့ ထပ်တူ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ…..
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ၀ါးတွေပွင့်လို့ ချင်းတောင်မှာ ကြွက်တွေသောင်းကျန်းတဲ့အကြောင်း ကြားမိသေးတယ်လေ၊
အတိတ်ကောက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီလေ.. အနာဂါတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ ပိုမှန်မလားပဲ.. မြန်မာစကားကလဲ ခက်သားဗျ၊ တစ်ချို့ဟာတွေက ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးမှားနေတာလေ.. ဒါပေမယ့် သုံးနေကြတုန်းပဲ.. ကျွန်တော်လဲ တိုင်းရင်းသားဆိုတော့ သိပ်မကျွမ်းပါဘူးလေ.. လိုရင်းကို ဆက်ကြတာပေါ့
လိုသလိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်တာပေ့ါ၊ အရောင်တွေထဲမှာ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်ဘက် အဖြူနဲ့ အနက် တွဲဝတ်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်တောင် သဘာဝကျကျ ဆွဲဆောင်နိုင်လေသလဲ။ မြန်မာပြည်လဲ အဲလိုပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဗီလိန်လဲ ဗီလိန်သရုပ်ပီအောင် သရုပ်ဆောင်ပြ၊ မင်းသားလဲ မင်းသားပီသအောင် သရုပ်ဆောင်ပြ၊ အရေးကြီးတာ ဇာတ်လမ်းကောင်းဖို့ပဲ။
စကားမစပ်ဗျာ.. စိုင်းစိုင်းရဲ့ သေပြီဆရာလဲ ထွက်ပြီးရော ဒဂုံစင်တာတို့၊ ၈ မိုင်တို့မှာ ဗုံးတွေပေါက်လိုက်တာ တစ်အုန်းအုန်းပဲဗျ။ ကြုံလို့ ၀င်ပြောပြတာ။
ဗမာစကား မမှားပါဘူးဗျာ..အတိတ်ကောက်တယ် လို့ အလွယ်ပြောကြတာ .။
အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ အခုတွေ့မြင်နေတဲ့ နမိတ် ကိုကြည့်ပြီး အနာဂတ် ကို ကြိုတင် ဟောကိန်း ထုတ်တာကို”အတိတ်နမိတ်” ကောက်တယ် လို့ ရှေးကဆိုကြပါတယ်။ အခုတော့အလွယ်စကားနဲ့ အတိုပြောကြတော့ အတိတ်ကောက်တယ် လို ဆိုလိုကြောင်း.ပါခင်ဗျား။
ဒါထက် စကားမစပ်..မုဒုံကန်တော်ကြီးလဲရေနောက်နေလို့ ဒေသခံတွေ နမိတ်ကောက်လို့ တွေးကြောက် နေကြကြောင်းပါခင်ဗျား……။
မှတ်မိတာလေးတွေ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အန်တီကလည်း ကိုယ်လိုရာအတင်းဆွဲပြောတာ အချက်အလက် မစုံတော့ ရွာသားတွေရဲ့ ထောက်ပြကြတာလေးတွေလိုချင်ပါတယ်။ကျေးကျေးပါ။
“နဂါးနီ” သီချင်း ကို ဒီနေ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော် ကို ပြန်ဆိုခိုင်း၊ ဒီတော့ ခလေးတွေ ပါနေ့စဉ် “ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ …… လူမွဲတွေက မနှေးခေတ်မှီ သူဌေးဖြစ်တော့မည်” လို့ အော်ဆို။
အားလုံး ဆန္ဒတူကြရင်ဖြင့် အစ်မပြောသလို အမှန်တရား နဲ့ ကျွန်မတို့ပြည်ကြီး လှသွားကောင်းပါရဲ့ အစ်မရေ။
ကြွပ်ကြွပ်အိတ် လေးတွေ ကချစ်စရာ။ သူငယ်ချင်းမမရဲ့ ချည်ထည် opposite လေး ကလဲ လှ။
လူတွေ အပြောများ လက်ဆင့်ကမ်းများလာရင်.. အတိတ်တဘောင် ဆိုတာဖြစ်သွားပြီး.. အဲဒါကနေ.. အနာဂတ်အရကောက်တာပဲလို့ ထင်မိပါတယ်..။
ဒီခေတ်အမြင်နဲ့.. တွေးကြည့်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်..။
လူတွေက..သိစိတ်..မသိစိတ်ထဲက… ကိုယ်လက်ခံတာကို ဆင့်ပွားပြောတယ်..။ ကြားတာကို.. မသိစိတ်ကလက်ခံထားတယ်.. အားပေးတယ်..။
ဒီလိုနဲ့.. တဘောင်နမိတ်တွေ.. အသက်ဝင်လာတယ်ပေါ့…။
အရူးရယ်.။ ကလေးရယ်..။ သဘင်သည်ရယ်ကနေ.. တဘောင်အရကောက်ကြလေ့ရှိတာပါ..။
မဃဒေ၀မှာ.. ၀ါးပြုန်းရင် တိုင်းပြည်ပျက်တယ်ရေးထားခဲ့တယ်….။
၀ါးပင်က..အသီးသီးရင် ပြုန်းတယ်(သေတယ်) မှတ်ဖူးပါတယ်..။
( ကြွက်က.. ၀ါးသီးကြီုက်တယ်တဲ့..။ ၀ါးသီးကို ကြွက်စား၇င် မျီုးပွားထွားကြိုင်းတဲ့ကြွက်တွေ.. လယ်တွေဖျက်တော့.. စပါးထွက်ကျ..။ လူတွေငတ်..အုံကြွ.. စိတ်ပျက်.. ဒါက.. လော့ဂျစ်အရကောက်ပါ)
၈၈ ကတော့ လက်တွေ့ကျကျ.. မျက်စိနဲ့တပ်အပ်မြင်ရတာပါပဲ..။
အဲဒီတုန်းက.. တရုတ်ပြည်က မြန်မာပြည်ထဲ(ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲ) အခြေချဖို့ ၀င်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းအဖေပြောတာမှတ်မိတယ်..။
သူ.. ကမ္ဘာစစ်အပြီး မြန်မာပြည်ထဲလာတော့.. ၀ါးတွေအပွင့်ပွင့်နေသတဲ့လေ..။
၈၈ မတိုင်ခင်က.. မြန်မာပြည်ထဲ.. ဧရာမငှက်ကြီးတွေ ၀င်လာပြီး.. ပြုတ်ကျလို့.. တိရိစ္ဆာန်ရုံပို့ထားတာလည်း မှတ်မိတယ်..။
ဆရာမင်းသိ င်္ခကတော့.. လဒကြီးတွေလို့ ပြောဖူးတယ်.။ နိမိတ်ပေါ့..။
“ဖာသည်နိုင်ငံ”တို့..။” မြောင်းထဲရောက်သွားမယ်”တို့..။ တဘောင်နိမိတ်အရကောက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်..။
အခုတော့… မြန်မာမတွေ မြန်မာအကျီ င်္ဝတ်ဖြစ်လာကြတာ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. ၁၀စုနှစ်၂ခုမက.. (ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ) တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့.. ရလဒ်ဆိုပါစို့..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. ကမ္ဘာတန်းမီဒီယာတွေမှာ ထပ်ခါပါနေတော့ကာ… သူ့ကိုအားကျအတုယူချင်တဲ့.. ကမ္ဘာနိုင်ငံစုံကအမျိုးသမီးတွေ…သန်းချီလူဦးရေကြီးကို.. မီဒီယာအစုံက.. အခမဲ့.. ကြော်ငြာပေးနေသလိုဖြစ်လာတာပါ..။
ဒါဟာ.. ကောင်းတဲ့ နိမိတ်ဆိုတာ သေချာသပေါ့..။
တခါေ၇းဖူးပါတယ်.။ မြန်မာအ၀တ်အစား.. မြန်မာတွေဝတ်ရင်.. မြန်မာအထည်နဲ့ဖက်ရှင်အင်ဒတ်စရီတိုးတက်မှာပေါ့..။
ကမ္ဘာကလိုက်ဝတ်ရင်..ဘီလီယန်ဘစ်ဇနက်ပါ..။ လူသန်း ၅၀လိုက်ဝတ်ရင်ကို.. တထည် ၁၀ဒေါ်လာနဲတွက်ရင်.. သန်းဒေါ်လာ သန်း၅၀၀ လည်ပါတ်သွားပြီလေ..။ တလတထည်ဝယ်လိုက်တယ်ထား.. တနှစ်လည်ပါတ်ငွေတွေးကြည့်ယုံပါ..။
ဆေးဆိုး..ပန်းထိုး.. ကုန်တင်..ပို့ချ..ဖက်ရှင်..ကြော်ငြာ..နေရာစုံမှာ.. မြန်မာတွေသိန်း-သန်းချီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းပေါ်မှာပေါ့..။
အလုပ်အကိုင်တွေရတေ့ာ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာပေါ့…။ ချမ်းသာမှာပေါ့..။
မြန်မာတိုင်း.. ဒါကို သေသေချာချာအာရုံစိုက်လုပ်ကြဖို့ လိုမယ်ထင်မိတယ်..။
ဖြစ်နိုင်ရင်.. ဖက်ရှင်နဲ့..အ၀တ်အစားကို..လူတိုင်းသုံးလွယ်..၀တ်လွယ်အောင်..ဒီဇိုင်းအဆင်လှအောင်.. ရေလျှော်ခံအောင်..။ တာရှည်ခံအောင်..။ အရည်အသွေးမြင့်အောင်.. တက်စ်စိုင်းအင်ဂျင်နီယာတွေ..ပညာရှင်တွေနဲ့.. သုတေသနပြု.. လုပ်သင့်လှတယ်.။
ပိုဖြစ်နိုင်၇င်..အစွမ်းရှိရင်.. ဒေါ်စုရဲ့.. The Lady ကားတင်ချိန်အပြိုင်လောက်.. ကမ္ဘာပါတ်မိတ်ဆက်သင့်သပေါ့..။
အန်တီပဒုမ္မာ ရေးတာ ကို ကြိုက်မိသလို
သဂျိုင်ခီး ကွန်မင့် ကို လည်း ကြိုက်ပါ၏
“ဥုံ.. .. အောင်အတိတ်..အောင်နမိတ်နဲ့..အောင်ကြစေသတည်း..။ ”
ဒို့ သူကြီးမင်းရဲ့ လေသံတောင် တော်တော်ပြောင်းလဲသွားပါလား။
အဲဒါကို အတိတ်ပြန်ကောက်ရရင် သိပ်မကြာခင် အင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ မြင်ရကိန်းရှိတယ်။
တိုးတိုးလေး ဆက်ပြောလိုက်ဦးမယ် ။ လာ.. လာ.. အနားတိုးပြီးနားထောင်……
ဟာ…ဒါဆို ကြို တွက်မထား တဲ့ အပြောင်အလဲ တွေလဲ ရှိ
အတိတ်ဆိုတာ past tenseကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
အတိတ် နမိတ် ရှေ့ဖြစ်မည့်အရာတွေကို မှန်းဆ တွေးဆ ပြောတာပါ
အယူတော် မဂ င်္လာကျမ်း၊ ၀ိဇ္ဖာဓရ န၀င်းပညာ အရ ပါ ဖြစ်တာများပါတယ်
ကိုရင် စည်သူရှင်းရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် ကျွှန်တော်က သိပ်မပိုင်ဘူး
ဦးဦးပါလေရာ..ကိုပြောမယ်ဆိုရင် ငွေတွေ တထပ်ကြီး မနေ့ကကိုင်ထားတယ်
ကော်ဖီဖိုးတွေရှင်းတယ် ဒီနမိတ်အရ ဦးဦးဟာ မကြာခင်မှာ ငွေ အလုံးအရင်ဝင်ပြီး
ခရီးတခုသွားရမယ်။ကိုရင် စည်သူ ..ဟုတ်တယ်နော်။အပေါ်မှာရေးသလို သီချင်းအရ
ဖြစ်တာများပါတယ် သတိထားကြည့်ပါ။နောက်တခုက ရွာတစ်ရွာမှာ ဇာတ်ပွဲလာတယ်
လူရွှင်တော်က လေငန်းကွဆိုပြီး ပါးစပ်ကိုရွဲ့ လက်ကို ကွေးပြီး စကားကလညးမပီကလာ
ပီကလာနဲ ပြောတယ် ဇာတ်သမားပြန်တော့ မှတ်သားစရာမကျန်ဘဲ လူတော်တော်များများလေဖြတ်ကြတာပဲ ။ကောင်းတဲ့ နမိတ်လေးတွေ ပြောတာကောင်းပါတယ်
သူကြီးမင်းပြောသလို အောင်အတိတ် အောင်နမိတ်နဲ့ ဒေါက်တာကောက်တဲ့နမိတ် ဖြစ်စေသတည်းပေါ့။
အဲဒီနှစ်ရောင်စပ်တာ တရုတ်နဲ့ကုလားကို ညွှန်းတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ….။
အောင်ပါစေ သပြေပန်းနဲ့ေ၇ချမ်းကိုလောင်း
မြန်မာပြည်ကြီး အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ အေးချမ်းပါစေကြောင်း
ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား …
ဇမ္ဗူဒီပါ လကျာင်္တောင်ကျွန်း နမိတ်ထွန်းသည် လို့ ဆိုရိုး ရှိလို့ပဲလား
(သဂျီးပြောသလို-ငရဲနဲ့ခြောက်၊ ဘုံနဲ့ မြှောက်ထားခံရတဲ့ အကျိုးဆက်တွေလားတော့မသိဘူး)
မြန်မာတွေ အတိတ်နမိတ် ကောက်လေ့ရှိကြတယ်။
Opposite ဆန့်ကျင်ဖက်တွေ တူညီစွာပေါင်းစည်း တွဲစပ်လာတာကို မြင်ရ တွေ့ရတာတွေများလို့ကို သတိထားမိလာတာ။
အခုတလော အပြောများနေတဲ့ မတူတာတွေ ဘေးဖယ်ပြီး တူတာတွေတွဲလုပ်ကြဖို့ ဆိုတာရဲ့ အတိတ်နမိတ်လို့ ထင်မိပါရဲ့။
၂၀၁၂ ခုနှစ်ဟာ မြန်မာပြည်အတွက် မြန်မာပြည်သူားတွေအတွက်
ကောင်းသောအတိတ်နမိတ်နဲ့ ကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်း ပြည့်ဝပါစေကြောင်း…..
နန်းတော်ရှေ့ ရဲ့ သူဌေးဝါဒ..
တလောက အောင်လ သီချင်း တော်တော် ပေါက်တယ်.. တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုတာကြီးပဲ..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုယ်လည်း ဘာမှ မလုပ်ရပဲနဲ့ ကြားထဲက ငထွားလုပ်ပြီး အောင်လ သီချင်း လိုက်ဆို ပြနေရခဲ့သေးတယ်။ FM က အဲဒီ သီချင်းသံ ကြားရင် တော်တော် အမြင်ကတ်လာတာ.. ကြားတောင် မကြားချင်လောက်အောင်ပဲ.. နမိတ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ ဖြစ်မှာ.. အခုတော့ ပြသနာလည်း ငြိမ်းသွားပြီ.. အောင်လ သီချင်းလည်း ဘယ်သူမှ မတောင်းကြတော့ဘူး FM တွေကလည်း လွင့်တာ သိပ်မရှိဘူး။ ကောင်းရောကွယ်။
အင်း အတိတ်နဲ့ တဘောင်ဆိုတာ ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့စကား အမြဲကြားဖူးပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်နောက်တာပြောင်တာရှိရင်တောင် ဟဲ့ မနောက်ကောင်းဘူး။ စကားနောက်တရားပါတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးကတော့ ငယ်ထဲက အတော်ရင်းနှီးနေတဲ့ အသံတွေပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လူကြီးတွေ ခုခေတ်ထဲမှာ အပြောများလာတာက ကောသလမင်းကြီး အိမ်မက် ၁၆ ချက်က ခုမှ ဖြစ်လာတာဆိုပဲ။ ကံ ကံ၏အကျိုးတော့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ခုခေတ်ပေါ်ဆိုပေမယ့် အရင့်အရင်က ပေါ်တာတွေလည်း ခုပြန်လည်ခေတ်စားလာတာကိုတွေ့ရတာပဲ။ သံသရာလည်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲပေါ့။ ကောင်းသောအတိတ်နိမိတ်နဲ့ ကောင်းသောစကားသံကိုတော့ အမြဲကြားချင်နေမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
မုဒုံကန်တော်ကြီးရေနောက်တာ ဝေေ၀ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင်လား ရိုက်ပြီးမှလား(အမျိုးသမီးမဆင်းရ ဆိုတာလေ)
နဂါးနီသီချင်းကို ကျွန်မလည်း ကြိုက်ပါတယ်၊
ွှအရင်က karaoke တွေမှာ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ သီချင်းပေါ့၊ အဓိပ္ပွယ်လည်းရှိပါတယ်။
မမရဲ့ ၀တ်စုံက လူကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြရင်ပိုလှမှာ၊သူ့ကို ၀တ်ပြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်လေ၊:D
ရေးသာရေးရတယ်။သူကြီးကများ ရယ်သွမ်းသွေးမလားလို့ စိတ်ပူနေတာ၊
အခုလို စိတ်ဝင်တစား ကွန်မန့် အရှည်ကြီး post ၂ခုပေါင်းမန့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးကျေးပါ။
၀ါးသုဉ်းတဲ့ အကြောင်း ဆရာဖိုးကျော့ရေးတဲ့ ၀တ္ထုတွေ သိပ်ဖတ်ကောင်းပါတယ်။ဗဟုသုတလည်းရ၊သတိလည်းရှိစေပါတယ်။
ကျွန်မတော့ စာတွေ့ဘဲရှိပါတယ်။၀ါးပွင့်တဲ့ပုံလေးများရရင် ပြပေးစေချင်ပါတယ်။
မြန်မာအကျီင်္အကြောင်း မြန်မာမလေးတွေ post မှာ ဆွေးနွေးပါရစေ၊
ဖတ်မိတဲ့သူတွေ message ရစေချင်လို့ပါ၊
အောင်အတိတ်အောင်နိမိတ်လေးတွေ ဖြစ်စေဖို့ ၂၀၁၂ မှာ ကောင်းမှုလေးတွေ များများလုပ်ကြပါစို့၊
ဂေဇက် စုပေါင်းသွေးလှူပွဲ စသည်စသည်)
တိုးတိုးပြောပြမှာတွေ post တစ်ခု ဖတ်ချင်ပါတယ်။ဦးပါလေရာမှာ ပြောစရာအချက်အလက်တွေ အများကြီး ရှိမှန်းသိပါတယ်။
အယူတော် မင်္ဂလာ ၊အတိတ်နိမိတ် ဆိုတာ မျက်စိမှိတ် ပုံမထားသင့်ပေမယ့် တတ်အပ်တဲ့ ပညာပါ။
သိထားတတ်ထားရင် သတိဝီရိယပညာ နှင့်အဆိုးမှ အကောင်းဘက် ပြောင်းနိုင်မယ်လို့ ယုံပါတယ်။
ကျွန်မက ကုလားနဲ့ တရုပ်လို့ မမြင်ပါဘူး
မတူတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အရေးအသားတွေပါ။ဒါပေမယ့် ၂ဦးသားဆုံမိတဲ့ post တွေဆိုရင် အင်မတန် ပြောင်မြောက်တဲ့ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ရပါတယ်။
ကြွပ်ကြွပ်အိတ်လေးတွေ ၂ရောင်သုံးလာကြတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်ပါလိမ့်လို့ မေးလာတဲ့ မမတို့ မောင်နှမ အမေးကို ဖြေရင်းပေါ်လာတဲ့ post လေးပါ၊
မမရဲ့ opposit ၀တ်စုံဓာတ်ပုံ သုံးခွင့်ပြုတဲ့ အတွက် ကျေးကျေးပါ။
ဒီ ၀တ်စုံနဲ့ဖြူဖြူချောချော (ဖားထားတာ) အပြင်မှာ မြင်ရင် အဲဒါ မမပါလို့ ဖော်ကောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်၊
FM က လွှင့်ပေမယ့် ကြားသူနဲ့ဘဲ သက်ဆိုင် သလားမသိဘူး၊အန်တီတိုတော့ ဘယ်သီချင်းမှန်းတောင် မသိလိုက်တော့ မတောင်းပန်ရဘူးပေါ့၊
နားထောင်ထောင် မထောင်ထောင် တစ်ပြည်လုံးနဲ့ ဆိုင်တာဆိုရင် ခက်ကရော၊
ကောသလ အိပ်မက် ၁၆ ချက် ကတော့ မှန် မှန် မှန် နေတာဘဲ၊
အန်တီကတော့ ဘူးတောင်းနစ်လို့ ဇောင်ခြမ်းပေါ်၊အနားကြည် အလယ်နောက်၊နွားကလေးနို့ နွားမကြီးစို့
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ကစားရင်စစ်တိုက်တန်း ကစားကြတာများတယ်။ ခုခေတ်ကလေးတွေဒါမျိုးမကစားကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ၂ဘက်စလုံးက မာန်တင်းမခံ ပဲ အလျှေားပေးပြီးလိုလိုချင်ချင်ဆွေးနွေးကြရင်ရနိုင်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အမျိုးသမီးတွေ လှအောင်ဆံပင်ကိုကောက်ကြတယ်။ အခုခေတ်ကျတော့ လှအောင်ဆံပင်ကိုဖြောင့်ကြတယ်။ နောက်ပိုင်း လူဖြောင့်တွေများလာမဲ့အတိတ်နိမိတ်လို့ထင်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက သူဌေးသားတွေ စမတ်ကျကျ ၀တ်ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူဌေးသားတွေ စတိုင်ဆိုပြီး ဂျင်းဘောင်းဘီကို အဖာတရာလုပ်ပြီးဝတ်ကြတယ်။ ဒါဟာ ဆင်းရဲမဲ့အတိတ်နိမိတ်လို့ထင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လားမသိဘူး ။ ပဲတွေအလိမ်ခံရတာ ခဏခဏပဲ။
မခင်လတ်ရေ။ နဂါးနီဆိုတော့ –
အနီရောင်ဝတ်ဆင်ပြီး နဂါးနီသီချင်းကိုဆိုပါလေ။ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝလတ္တံ့။ (ကို၇င်စည်သူ၏တပည့်)
ှုဦးပါလေရာရေ တန်းလန်းကြီးလုပ်မထားနဲ့လေ။ ငရဲကြီးတတ်တယ်နော်။
ကျွန်တော်ကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကို ကြောက်တယ်။ ကောလဟာလ အမျိုးမျိုးကြားရတဲ့အထဲ နှစ်ကုန်ခါနီးမှာ ပြင်းထန်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်လိုက်တော့ အတိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်မိတယ်။ ကောင်းတာတခုကတော့ မီးသတ်သမားတွေကို ပြည်သူတွေက စာနာသနားသွားတာတခုတော့ရှိတယ်။
ပဒုမာရေ -နွားကလေးနို့နွားကြီးစို့ပါကွယ်။ (မမ၏တပည့်)
မတူတာတွေ ပေါင်းစည်းခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်ဟုယူဆမိပါတယ်။စည်းလုံးခြင်း၊ညီညွတ်ခြင်း သည်အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
သူကြီးကိုလည်း ယနေ့မှစ၍ ဘိုးတော်ခိုင် ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
အစ်မရေ ကွန်းမန့်ရေးတာ နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်ဗျာ။
လေးလေးစားစား ၀င်ဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ။